Vaovao - Ahoana no fiasan'ny 5G any ambanin'ny tany?
5G dia andiany faha-5 an'ny teknolojia tsy misy tariby. Ho fantatry ny mpampiasa azy io ho iray amin'ireo haitao haingam-pandeha sy matanjaka indrindra hitan'izao tontolo izao. Midika izany fa misintona haingana kokoa, lag kely ambany ary misy fiatraikany lehibe amin'ny fomba fiainantsika, ny asantsika ary ny lalaontsika.
Na izany aza, any ambanin'ny tany ambanin'ny tany dia misy fiaran-dalamby ambanin'ny tany ao anaty tionelina. Ny fijerena horonan-tsary fohy amin'ny findainao dia fomba iray fialan-tsasatra amin'ny fiaran-dalamby ambanin'ny tany. Ahoana no manarona sy miasa ny 5G amin'ny tany ambanin'ny tany?
Miorina amin'ny fitakiana mitovy, ny fandrakofana metro 5G dia olana lehibe ho an'ireo mpandraharaha fifandraisan-davitra.
Ka ahoana ny fomba fiasan'ny 5G any ambanin'ny tany?
Ny gara Metro dia mitovy amin'ny lakaly misy rihana marobe, ary mora vahana amin'ny vahaolana In-building nentim-paharazana na rafitra antena nozaraina miasa vaovao ataon'ny mpandraharaha. Ny mpandraharaha tsirairay avy dia manana drafitra matotra tokoa. Ny zavatra tokana dia ny fanaparitahana araka ny endriny.
Noho izany, ny tionelina ambanin'ny tany lava dia ifantohan'ny fandrakofana ny metro.
Ny tionelina Metro matetika maherin'ny 1.000 metatra miaraka amin'ny tery sy miondrika. Raha mampiasa ny antenna itarihana, dia kely ny zoro fiandrasana famantarana, ho haingana ny fanalefahana ary mora sakanana.
Mba hamahana ireo olana ireo, ireo mari-pamantarana tsy misy tariby dia mila avoaka mitovy amin'ny lalana misy ny tionelina mba hananganana takelaka famantarana marindrano, izay tena hafa noho ny fandrakofana telo-sehatra ao amin'ny gara tonta. Izany dia mitaky antena manokana: tariby mamoaka.
Amin'ny ankapobeny, ny tariby misy matetika amin'ny radio, fantatra amin'ny anarana hoe feeder, dia mamela ny signal hivezivezy ao anaty tariby mihidy, tsy vitan'ny hoe afaka mamoaka ny signal, fa ny fahaverezan'ny famindrana dia mety ho kely araka izay tratra. Ka ny signal dia azo afindra amin'ny fomba mahomby avy amin'ny lavitra unit mankany amin'ny antena, avy eo ny onjam-peo dia azo ampitaina amin'ny alàlan'ny antena.
Etsy ankilany, hafa ny tariby mamoaka. Ny tariby mamoaka dia tsy miaro tanteraka. Izy io dia manana slot famoahana mizara mitovy, izany hoe, tariby mamoaka ho andian-dahatsoratra kely, mamela ny fivoahana mivoaka mitovy amin'ny alàlan'ny slots.
Raha vantany vao mahazo ireo signal ireo ny telefaona finday dia azo alefa amin'ny alàlan'ny slots mankany anaty ny tariby ireo fambara ary avy eo alefa any amin'ny Base Station. Io dia mamela ny fifandraisana roa-lalana, namboarina manokana ho an'ny seho an-tsipika toa ny tunnels metro, izay mitovy amin'ny famadihana ny jiro nentim-paharazana ho fantsom-bozaka lava.
Ny fandrakofana ny tonelina ao Metro dia azo vahana amin'ny alàlan'ny telegrama mivoaka, saingy misy ny olana mila vahan'ireo mpandraharaha.
Mba hanompoana ny mpampiasa azy ireo, ny mpandraharaha rehetra dia mila manatanteraka ny fandrakofana famantarana ny metro. Raha jerena ny habaka voafaritra ao anaty tionelina, raha toa ny mpandraharaha tsirairay manangana karazana fitaovana, dia mety ho loharanom-pako sy sarotra izany. Noho izany ilaina ny mizara ireo tariby tafaporitsaka ary mampiasa fitaovana iray izay manambatra karazana hafa avy amin'ireo mpandraharaha isan-karazany ary mandefa azy ireo ao anaty tariby mamoaka.
Ilay fitaovana, izay manambatra ny signal sy ny spectrums avy amin'ny mpandraharaha isan-karazany, dia antsoina hoe Point of Interface (POI) Combiner. Ny Combiners dia manana tombony amin'ny fampiarahana marika marobe sy fatiantoka ambany fidirana. Mihatra amin'ny rafitry ny fifandraisana izany.
Amin'ity fampisehoana sary manaraka ity dia misy seranan-tsambo maromaro ny mpamatsy POI. Afaka manambatra mora foana ny 900MHz, 1800MHz, 2100MHz, ary ny 2600MHz ary ny hafa matetika.
Manomboka amin'ny 3G, MIMO dia niditra tamin'ny sehatry ny fifandraisana an-tariby, lasa fitaovana lehibe indrindra hampitomboana ny fahafahan'ny rafitra; amin'ny 4G, 2 * 2MIMO dia lasa fenitra, 4 * 4MIMO dia avo lenta; hatramin'ny vanim-potoana 5G, 4 * 4 MIMO no lasa fenitra, afaka manohana ny ankamaroan'ny telefaona finday.
Noho izany, ny fandrakofana ny tunnel metro dia tsy maintsy manohana ny 4 * 4MIMO. Noho ny fantsona tsirairay an'ny rafitra MIMO dia mila antena tsy miankina, ny tadin'ny tionelina dia mila tariby mitete efatra mifanila mba hahatratrarana 4 * 4MIMO.
Araka ny asehon'ireto sary manaraka ireto: ny tarika 5G lavitra ho loharanom-pahalalana dia mamoaka signal 4 izy, ny fampifangaroana azy ireo amin'ny signal an'ny mpandraharaha hafa amin'ny alàlan'ny POI kombina, ary manome azy ireo ho tariby mitete 4 mifanila, mahatratra ny fifandraisana roa fantsona . ity no fomba mivantana sy mahomby indrindra hampitomboana ny fahafahan'ny rafitra.
Noho ny hafainganam-pandehan'ny lalamby ambanin'ny tany, na dia ny fivoahan'ny telegrama mba hanaronana ny tsipika iray aza, ny telefaona finday dia hatrizay hatrizay dia haverina ary hifidy indray eo amin'ny fihaonan'ilay zotra.
Mba hamahana ity olana ity dia afaka mampitambatra vondrom-piarahamonina maromaro ho lasa vondrom-piarahamonina iray lehibe izy ireo, amin'ny lozisialy dia an'ny vondrom-piarahamonina iray, ka manitatra imbetsaka ny fandrakofana vondrom-piarahamonina tokana. Azonao atao ny misoroka ny famindrana sy ny famerenana amin'ny laoniny imbetsaka, saingy mihena ihany koa ny fahafaha-miasa, mifanaraka tsara amin'ny faritra fifamoivoizana ambany.
Noho ny fivoaran'ny fifandraisana an-tariby dia afaka mankafy ny fambara finday isika amin'ny fotoana rehetra, na aiza na aiza, na dia ambanin'ny tany lalina aza.
Amin'ny ho avy dia hovaina amin'ny 5G ny zava-drehetra. Ny hafainganam-pandehan'ny fiovana ara-teknolojia tato anatin'ny folo taona lasa dia haingana. Ny hany zavatra fantatsika tsara dia ny hoe, amin'ny ho avy, dia hitombo haingana kokoa izany. Hiaina fiovan'ny teknolojia isika izay hanova ny olona, ​​ny orinasa ary ny fiaraha-monina amin'ny ankapobeny.
Fotoana fandefasana: Feb-02-2021